Ifaka Kalula I-China 20FT Office Folding Container House Iyathengiswa
Iziqukathi ezigoqekayo ezigoqekayo zenze intuthuko ethile ngesisekelo sendlu yesiqukathi esejwayelekile. Ingasongwa ukuze ikwazi ukonga igumbi lapho ilayishwa esitsheni sokuthumela. Ngamanye amagama, i-40HQ eyodwa ingalayisha iziqukathi eziningi zokusonga kuneziqukathi ezijwayelekile (Usayizi wayo ingu-5800x2450x2500mm lapho ugoqiwe). Futhi ubude bayo bempilo bude ngaphezu kwesiqukathi sephakethe esiyisicaba. Lolu hlobo lwesitsha sokugoqa imvamisa sisetshenziselwa ukuba yindlu yokuhlala ngenxa yenani laso lokuncintisana. Usayizi 2500X5800X255 ...
Isikhungo Sokugcina Sokwakha Sokwakhiwa Kwensimbi Esakhiwe Ngokushesha
1.Ukwakha uhlelo olwenzelwe wena Warehouse uma unemidwebo nemininingwane yezobuchwepheshe, wamukelekile uthumele kithi nganoma yisiphi isikhathi. Umgomo wethu awukona nje kuphela ukuhlinzeka ngesakhiwo sensimbi esezingeni eliphakeme, kepha futhi nokugcina ubuhlobo obenziwe ngezifiso nobuchwepheshe nekhasimende ngalinye. Akunandaba ukuthi imfuneko yakho inkulu noma incane kangakanani sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nesidingo sakho. Isevisi eyodwa yokumisa kusukela ekwakhiweni, ekwenziweni, ekulethweni ekufakweni nasemva kwenkonzo. 1.We kungaba akhiqize ngokuqinile ngokuvumelana d yakho ...
Uhlaka lwe-Gable light light lwakhiwo lwendlu yokugcina impahla lwakhiwe
1.Ukwakhiwa Kwesistimu ● Ukuthembeka okuphezulu komsebenzi wensimbi. Isikhathi eside sisebenzisa isikhathi esifinyelela eminyakeni engama-50. ● Isakhiwo sensimbi sinomthelela, ukuzinza nokuhle kokulwa nokuzamazama komhlaba kwesisindo kulula. ● Isakhiwo sensimbi esisetshenziselwe izinga eliphakeme lezimboni. ● Izakhiwo zensimbi zingahlanganiswa ngokushesha nangokunembile, ukonga isikhathi nokonga abasebenzi. ● Indawo enkulu yangaphakathi yensimbi noma ifreyimu yensimbi, ubude obukhulu besakhiwo sensimbi bungafinyelela kuma-80meters. ● Cishe ukudala isakhiwo uphawu. ● Muhle ...
Intengo ephansi ukwakhiwa kwesakhiwo sensimbi enkulu yesikhala esisodwa isakhiwo sensimbi esinezitezi ezimbili sakhiwo
1.Installation Uhlobo lwethu olusha lwensimbi luyinto elula ukufaka, amamitha ayisikwele angama-2,000 angaqedwa kungakapheli isonto elilodwa ngabasebenzi aba-5. 1) Amafreyimu amakhulu wensimbi (isakhiwo) konke kuxhunywe ngamabhawodi amakhulu, akukho sidingo sokushisela esizeni. Ukufakwa kwayo kufana namabhulokhi wokwakha. (2) Izinhlobo ezi-2 zama-purlins zizosetshenziswa ophahleni nasezindongeni Zesakhiwo Sethu sensimbi. (okungenani kunezinhlobo ezi-4 zama-purlins ezizosetshenziswa ophahleni nasezindongeni ngomunye umkhiqizo ...
China engcono umphakeli steel Uhlaka ungqimba iqanda inkukhu yezinyoni yenkukhu epulazini ukwakhiwa indlu design ukudayiswa eKenya
1.Izinkukhu indlu iVanhe Modular House Co, Ltd ingumkhiqizi ochwepheshe wensimbi eyakhiwe eChina. Idizayini, ukuphakela nokufaka izakhiwo zensimbi (isakhiwo sensimbi, izakhiwo zokugcina impahla yensimbi, i-hangar yensimbi), ene-ISO9001, iSGS kanye nesitifiketi se-CE, okuhlangenwe nakho kweminyaka engama-20 +, amazwe angama-90 + athunyelwe: iTopiya, iTanzania, iNigeria, iNingizimu Afrika, I-Algeria, Dubai, Saudi Arabia, Thailand, Australia, France, Germany njll Emhlabeni jikelele. Isakhiwo se-customi ...
Hot Sale Large Metal Modern Rain Resistance Steel Sakhiwo Chicken Ekhaya Izinkukhu House Inkomo Ipulazi Isakhiwo
1.VANHE Izinkukhu House Vanhe Modular House Co., Ltd kuyinto nomkhiqizi professional isakhiwo steel eChina. Idizayini, ukuphakela nokufaka izakhiwo zensimbi (isakhiwo sensimbi, izakhiwo zokugcina impahla yensimbi, i-hangar yensimbi), ene-ISO9001, iSGS kanye nesitifiketi se-CE, okuhlangenwe nakho kweminyaka engama-20 +, amazwe angama-90 + athunyelwe: iTopiya, iTanzania, iNigeria, iNingizimu Afrika, I-Algeria, Dubai, Saudi Arabia, Thailand, Australia, France, Germany njll Emhlabeni jikelele. Inqobo nje uma ukwazi ...
isakhiwo esakhiwe ngensimbi esinezindleko eziphansi indlu yezimbuzi eshedeni yezinkukhu
1.VANHE Izinkukhu House Vanhe Modular House Co., Ltd kuyinto nomkhiqizi professional isakhiwo steel eChina. Idizayini, ukuphakela nokufaka izakhiwo zensimbi (isakhiwo sensimbi, izakhiwo zokugcina impahla yensimbi, i-hangar yensimbi), ene-ISO9001, iSGS kanye nesitifiketi se-CE, okuhlangenwe nakho kweminyaka engama-20 +, amazwe angama-90 + athunyelwe: iTopiya, iTanzania, iNigeria, iNingizimu Afrika, I-Algeria, Dubai, Saudi Arabia, Thailand, Australia, France, Germany njll Emhlabeni jikelele. 1). Ngokuvamile ...
China Prefabricated Bathroom Design Outdoor Portable Toilets Mobile Shower Igumbi
Indlu yangasese ephathekayo 1.Itheyilethi ephathekayo I-Toilet ephathekayo ephathekayo Inesakhiwo sohlaka esakhiwe ngensimbi eshisiwe. Ngokuvamile, phansi kushiselwe ngensimbi yesiteshi noma i-I-beam, futhi ikholomu yenziwa ngensimbi eyisikwele. Izinto zokwakha udonga zenziwe ngamapuleti wensimbi anombala, ingilazi yensimbi, insimbi engagqwali, nezinsimbi eziqoshiwe. Amathoyilethi aphathekayo ayisisindo esincane, ukusetshenziswa okulula, Ukubukeka okuhle. Izindlu zangasese ezakhelwe ngaphambili
Ukufaka okulula kwendlu yangasese yomphakathi ephathekayo i-EPS isangweji madecheap mobile wc yangasese sanitary
Indlu yangasese ephathekayo 1.Mathoyilethi aphathekayo Indlu yangasese ephathekayo idle ibekwe kabanzi endaweni yomphakathi engaphandle, njengendawo yamadolobha, ipaki, indawo yokubuka izivakashi, indawo yokusebenzela, indawo yokugcina impahla, njll. Indlu yangasese ephathekayo ilula futhi ingahlangabezana nezidingo zabantu zansuku zonke .Njengokubukeka okuhle, izakhiwo ezizungezile zibukeka zizinhle kakhulu.Amathoyilethi aphathekayo awonga ugesi, alungele imvelo futhi ayasebenziseka. Igumbi likasayizi One: 1.1.1MX1.1MX2.3H Igumbi ezimbili: 1.1.1MX2.2MX2.3H Igumbi ezintathu: 1.1.1MX3.3MX2.3H isitayela se-Squat Toilet / Toile ...
Isitolo esidayisa yonke impahla eshibhile Intengo Ephathekayo Yamakhemikhali Amathoyilethi Ahambayo Isithabathaba Esihambayo Esithintekayo Amathoyilethi Ahambayo Ayathengiswa
Indlu yangasese ephathekayo 1.Mathoyilethi aphathekayo Indlu yangasese ephathekayo idle ibekwe kabanzi endaweni yomphakathi engaphandle, njengendawo yamadolobha, ipaki, indawo yokubuka izivakashi, indawo yokusebenzela, indawo yokugcina impahla, njll. Indlu yangasese ephathekayo ilula futhi ingahlangabezana nezidingo zabantu zansuku zonke .Njengokubukeka okuhle, izakhiwo ezizungezile zibukeka zizinhle kakhulu.Amathoyilethi aphathekayo awonga ugesi, alungele imvelo futhi ayasebenziseka. 2.Details UMBALA OWENGEZIWE KANYE OKWENGEZIWE IJOYILE JOYILE kungenziwa ngezifiso. 3.Advantage 1.Customized design: Unga ch ...
Izindlu ezinwetshiwe ezifakwe kusengaphambili zesakhiwo esigoqiwe
1.Folding Container House EXCLUSIVE PATENT Lolu hlobo lwendlu yamakhonteyina esongwayo yaklanywa ngo-2010 Omunye wamakhasimende ethu wayefuna amakamu okusetshenzwa kanzima kuwo.Wasitshela ukuthi izindleko zabasebenzi ezweni lakhe zaziphezulu kakhulu, futhi wayengenalo ulwazi lokufaka izakhiwo. Ngakho-ke simakhele le ndlu. Indlu esongwayo ingagoqwa futhi ivele kaningi, futhi ingafakwa kalula ekuphatheni kwemizuzu eyi-10. Isitsha sokugoqa esenziwe ngaphambili senziwe ngesakhiwo sensimbi esikhanyayo namapaneli wesamishi f ...
Isitayela Esisha Sokulungiselela Ukufakwa Kwesitsha Indlu Encane
I-1.Folding Container House PATENT YOKUPHELA Igumbi lokugoqa lokugoqa livimba umsindo, alinamlilo, alinamanzi, alinaso isihlabathi, alinakuvinjelwa umoya futhi alinamahloni nezinye izici.Lingaba bukhoma okwesikhashana noma unomphela.Lingasetshenziselwa iHhovisi, igumbi lokufundela igumbi kanye Uhlaka lwensimbi oluhlanganisiwe luhlala isikhathi eside futhi lungasebenzi, udonga nophahla kungamapaneli wensimbi yensimbi enemibala, kuhle ekuvaleni, kungasetshenziswa nasogwadule, umhlaba wotshani, iqhwa-berg, ngasolwandle, kufanele yonke into ...